Suuqgeynta Mawduuca iyo Nidaamyada Suuqgeynta Tusmada »Bogga 313 ee 378 Martech Zone
Adtech Falanqaynta & Tijaabada Content Suuq Data Ganacsiga iyo Tafaariiqda Email Marketing Teknolojiyada soo ifbaxaya Suuq geynta Fiidiyowyada Suuqgeynta & Iibka Buugaagta Suuqgeynta Dhacdooyinka Suuqgeynta Macluumaadka Suuqgeynta Aaladda Suuqgeynta Tababarka Suuq geynta Suuqgeynta Mobilada iyo Mashiinka Xiriirka Dadweynaha Kordhinta Iibka Suuq Goobid Media Social Suuq
Arbacada, Janaayo 7, 2009 Arbacada, Janaayo 7, 2009 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Hagaag, isagu shaqsi ahaan uma dhihin, laakiin ereyada Seth Godin waxay si mug leh uga hadlayaan mowduucayga ganacsiga iyo istaraatiijiyadaha suuqgeynta warbaahinta bulshada ee khaldan
Arbacada, December 31, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Haddii aad aqriste halkan joogtay in muddo ah, waxaad ogtahay inaan jeclahay StumbleUpon. Bloggeygu wuxuu sii wadaa inuu helo tiro badan oo soo booqdayaal ah oo loo maro Stumbleupon. Sida caadiga ah, dadku ma jecla inaad adigu iskaa u kobciso bogaggaaga bogagga sida StumbleUpon. Waxaan soo gudbiyay qoraalo ii gaar ah waagii hore - laakiin marar dhif ah. Haddii aan u maleynayay in qoraalka uu ahaa mid muran dhaliyay ama aan ku kasban lahaa dareen badan saameynteeda,
Isniin, Disembar 29, 2008 Saturday, April 30, 2016 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Haddii aad sameyso baaritaanno ka mid ah boggaga ugu waaweyn ee ku dhawaaqaya doodda Hay'adda Twitter, waxaad ka heli doontaa aflagaadadayda inta badan faallooyinka. Waxay ii wadaa nuts in qof walbaa uu ka sii hadlo - qofna xitaa wuu tegey oo wuxuu dhisay Twitority iyo Twithority. Magac ka sii wanaagsan ayaa noqon lahaa Raadinta Tweets ee Nidaamka Ka Soo Baxaya Tirada Kuwa Raacaya. Waan ogahay, taasi waa magac aad u dheer, laakiin kani waa sida saxda ah waxa uu yahay. Maaha
Axad, Disembar 28, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Haddii aanan haysan wax aan ku qoro boggeyga, sida caadiga ah waxaan sameeyaa xoogaa baarin ah oo aan ka helayaa xiriiro aan caadi ahayn oo aan kuwaa la wadaago. Haddii aad waqti siineysid inaad ku laabato degelkeyga ama aad uqorto quudintayda, waxaan rabaa inaan hubiyo inaanan waqtigaaga kaaga luminayn nus-ka-sheegashada boostada. In kasta oo dadaalkaygu jiro, qaar ka mid ah qoraalladaydu waa istiinyahanno kuwa kalena waxay helayaan taxaddar badan. Ka dib markii blogging sannado hadda,
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Waad ogtahay inaad tahay hiliye baraha bulshada (farxad leh), goorma: Markaad bilowdo ama aad saxiixdo codsi si aad u joojiso jawaabaha otomaatiga ah ee Twitter… taas oo aan run ahaantii sameyn doonin wax ay ku joojiso jawaabaha otomaatiga ah ee Twitter. Waxaad u maleyneysaa in bixinta shirkadaada blog-ka ay xad gudub ku tahay amarrada qoritaanka. Waxaad u maleyneysaa in shirkad ku soo saareysa dabeecad baraha bulshada si ay u suuq geyso wax soo saarkooda ay tahay istiraatiijiyad fashilantay, xitaa marka ay ka dhalaneyso kordhinta iibka iyo soo-gaadhista. Waxaad u maleyneysaa blogs
V Hore 1 ... 312 313 314 ... 378 Next →